ဖြုတ်တပ်နိုင်သောသံမဏိကြံ့ခိုင်မှုစက်ဝိုင်း - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်မပါ ၀ ယ်ပါ WoopShop®
$38.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $63.99
အရောင် အနီရောငျ ခရမ်းရောင်နု စိမ်းလန်းသော ပြာသော
အနီရောငျ ခရမ်းရောင်နု စိမ်းလန်းသော ပြာသော
ဖယ်ရှားနိုင်သောသံမဏိကြံ့ခိုင်မှုစက်ဝိုင်း - အနီရောင် backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အသက် - ၁၂-၆၀ နှစ်အရွယ်
အချင်းအကြောင်းကို 88 စင်တီမီတာဖြစ်ပါတယ်
အလေးချိန် ၁.၃ ကီလိုဂရမ်ခန့်ရှိသည်
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ - အပိုင်း ၆ ပိုင်းတွင်ဖြုတ်နိုင်သည်
ပစ္စည်း: tubular သံမဏိ + NBR မြှုပ်
အင်္ဂါရပ်များ - အပိုင်း ၆ ပိုင်း ခွဲ၍ ဖြုတ်နိုင်သည်၊ အက်ကွဲခြင်းကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်
လုပ်ဆောင်ချက် - Fitness ကွင်း, လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဝိုင်း, Bodybuilding လေ့ကျင့်ခန်းစက်ဝိုင်း, Crossfit ပစ္စည်း, အလေးချိန်ရှုံး
ငါကွင်းကိုကြိုက်တယ်၊ ဒါကြောင့်ဒုတိယအကြိမ်မှာလိုက်တယ် :)
ကိုယ်ကြိုက်တယ်! စူပါထုတ်ကုန် !!!
ဒါဟာမြှုပ်ဖုံးအုပ်စူပါဖြစ်ပါတယ်မြှုပ်ဖို့အတူတကွအစိတ်အပိုင်းများဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုငါရုံ hulan အလေ့အကျင့်ရှိရမည်